बलिउड कलाकार इरफान खानको अन्तिम यात्रामा २० जना मात्र जाने ! «
बलिउड कलाकार इरफान खानको अन्तिम यात्रामा २० जना मात्र जाने !
Published : 29 April, 2020 3:50 pm
बुधबार बिहान बलिउड अभिनेता इरफान खानले यो संसारबाट बिदा लिए । मंगलबार स्वस्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना भएका इरफानको बुधबार निधन भएको हो । ५४ वर्षीय इरफानलाई केही समयदेखि न्युरोइन्डोक्राइन भएको थियो ।
इरफानको अन्तिम संस्कार बुधबार साँझ ५ बजेको लागि तय भएको छ । तर, उनको अन्तिम संस्कारको यात्राको बलिउडका कोही पनि सेलिब्रेटीहरूको उपस्थिति हुने छैनन् । उनको अन्तिम संस्कारमा जम्मा २० जना व्यक्तित्वहरू रहनेछन् । जहाँ इरफानको परिवार र उनका निकटस्थ्यहरू मात्र हुनेछन्।
लकडाउनका कारण २० भन्दा बढी व्यक्तित्वहरू जम्मा गर्न नचाहेको उनको परिवारले बताएका छन् । इरफानको अन्तिम संस्कार मुम्बई पुलिसको निगरानीमा हुने बताइएको छ । बलिउड मिडियामा उल्लेख भएअनुसार उनको लासलाई अँधेरीको यारी रोड, वर्सोवा क्रिबिस्तानमा राखिनेछ ।